]प्रजातन्त्रको ठेकेदार ठान्ने अमेरिकाले महिलालाई खेलौना ठान्छ । महिला अब चुप लागेर बस्नु हुदैनु । विहानै देखि काममा जोतिने को ? घरको काम सकेर पहिला बारिको काममा जाने को ? महिला नै होइन ? त्यसैले अब घर भित्रको कामको पनि मल्यांकन गरिनु पर्छ र महिलालाई आर्थिक सम्वृद्धिबाट अघि बढाउनु पर्छ ।
आफुलाई होटल व्यावसायी भन्दा पनि समाजसेवी भन्न रुचाउने र समाज सेवामा नै सक्रिय अर्थात समाजसेवामा नाम कमाएकी उनि एउटा सफल व्यक्तित्व । व्यापार–व्यवसायबाट संसारका थुप्रै कुनामा पुगेर अनुभव बटुलेकी, ८५ वर्षीय उमेरमा पनि सक्रिय समाजसेवामा होमिएकी छन् । मेहनतकी धनि उनीसंग सवै देशको अनुभव छ । ट्राभल एजेन्सीको काममा व्यस्त उनि नर्वे, इटली, फ्रान्स, स्वीजरल्याण्ड, डेन्मार्क, जापानमा बढी काम गरेकी छन । दिल्लीमा लिगल अफिस नै खोलेर सेवा दिइन । स्पेनिस काउसेलर भएर पनि काम गरेकी उनी । हाल नेपाली महिलालाई आर्थिक समृद्धिबाटोमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर लागिपरेकी उनै अम्वीका श्रेष्ठसंग (हाेटल द्वारिकाजमा) उनको व्यावसायिक सफलता र त्यससँगै सामाजिक विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर अग्नीज्वाला डट कम र मासिक पत्रिकाका मा कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ : सम्पादक
मेरो विचारलाई पनि सवैका माझ पु¥याउने अवसर दिनु भयो त्यसका लागि अग्नीज्वाला टिमलाई धन्यवाद । होटल व्यवसायका विषयमा कुरा गर्न आउनु भएको थियो । तर म समाज सेवामा बढी सक्रिय भएकाले समग्रतामा कुरा कानी भयो त्यसका लागि विशेष धन्यवाद ।